IPoland ingenye yalezi zizwe eYurophu, lapho ufuna khona ukuphumula ngokuphindaphindiwe. Izivakashi ikakhulukazi zifana nenhloko yezwe - iWarsaw. Izakhiwo ezinhle kakhulu, ingqalasizinda engakhiwe ngokungenakulinganiswa, inqwaba yezinto ezikhangayo - konke lokho kunikeza isimo sengqondo esihle kanye nokuzijabulisa okukhulu. Futhi amahhotela eWarsaw aklanyelwe ukuheha abavakashele ezindaweni zabo. Lezi zikhungo ezifashisayo zinikeza izivakashi indawo yokuhlala enhle futhi ekhululekile kakhulu. Enhloko-dolobha yasePoland kukhona kokubili amahhotela abizayo nezama-elite, futhi angabizi, asebenza ekilasini lomnotho.
Ulwazi olujwayelekile mayelana namahhotela e-Warsaw
Amahhotela eWarsaw abhekene nenduduzo, ikakhulukazi isimo esamukelekayo kanye nensizakalo ezokwenza ukuhlala kwakho kule ndawo ye-megalopolis. Ihhotela ngalinye lizama ngendlela yalo ukuheha izivakashi ezindlini zabo. Ngaphandle kwekhwalithi ephezulu, izindawo zokuhlala enhloko - dolobha yasePoland zinikeza izivakashi indawo elula eduze kwezinto ezivelele kakhulu, izindawo zokudla ezidumile nezokuzijabulisa.
E-Old Town kunabelomali amahhotela aseWarsaw. Zihlukaniswa ngokungenisa izihambi nokuzithoba. Amaholide amaningi amane nezinhlanu ezinkanyezi phakathi kuka-Ephreli noMeyi, kanye no-September no-Okthoba ziyabiza kakhulu. Ngesinye isikhathi, ngamaholide nangezimpelasonto, banesaphulelo se-40%. Konke lokhu kufanele kucatshangelwe uma uhlela iholidi ePoland, futhi ikakhulukazi iWarsaw.
Ihhotela elisenhliziyweni yomuzi
, награжденный соответствующей инстанцией четырьмя звездами. Enhliziyweni yeWarsaw yihhotela elidumile lehhotela laseNovotel Warszawa Centrum , elinikezwe izinkanyezi ezine yigunya elifanele. Esiteshini esikhulu esivela kule ndawo yokuhlala - isigamu sekhilomitha kuphela. Ukusungulwa kubhekwa njengendlela ekahle emihlanganweni yebhizinisi kanye nohambo lwebhizinisi, njengoba lunezinkampanini ezinqunyiwe zenkomfa futhi lukwazi ukufinyelela okungenamkhawulo kwiWorld Wide Web.
Izivakashi zalo, izisebenzi zehhotela zihambisa ukudla kwasekuseni ekuseni ngalunye ngezingubo eziningi ezihlukahlukene. Amakamelo ehhotela ane-air conditioning, i-safes, izindawo zokusebenza, ama-TV-screen, nazo zonke izinto ezidingekayo ekwenzeni ikhofi noma itiye. Amafulethi afakwe ama-sofa noma izihlalo zokugqoka ezithambile nezindlu zokugezela ezinkulu kanye negumbi lokugeza noma ukugeza nokusheba izinwele. Uma ikhasimende idinga i-mini-bar, izonikezwa ngokukhokhwa okungeziwe.
Ihhotela e-Old Warsaw
Uma ufuna ukuhlola ingxenye endala yenhloko yePoland, kungcono ukuhlala e-Intercontinental Warszawa - ukuqaliswa kwezinkanyezi ezinhlanu ukunikeza izivakashi zayo uhla olugcwele lwezinsizakalo. Le ndawo yokuhlala yanamuhla yakhiwe ngo-2003, futhi eminyakeni eyisithupha kamuva yavuselelwa ngokuphelele. Idolobha elisuka e-Intercontinental lingatholakala phakathi nemizuzu eyishumi. Futhi eduze kwayo kunezikhangisi ezinjenge-Old Town Market Square neLazienki Park.
Ihhotela linendawo yebhizinisi, uxhumano lwe-intanethi kanye nomkopishi. Ukusungulwa kufakwe amakamelo angu-410, okunikeza ngamunye izivakashi umoya we-air, i-Wi-Fi, i-mini-bar ne-friji mini. Amanye amakamelo anikeza imibono engalingani nomuzi. Wonke amakamelo ashisa phansi futhi ifenisha ekhululekile. Isilinganiso samakamelo sihlanganisa kwasekuseni nsuku zonke.
Ihhotela eliseduze neKhosi likaMengameli
Eduze neNdunankulu Yomongameli kukhona ihhotela "iBristol" elakhiwe ngesitayela se-Neo-Renaissance. I-Bristol enezinkanyezi ezinhlanu, i-A Luxury Collection inikeza abavakashi induduzo yezinga eliphakeme, isevisi efanelekayo, izihambi kanye nenkonzo yaseYurophu. Kukhona amakamelo angu-168 anokunethezeka esikhwameni samakamelo ehotela, kanye nama-suites angu-38. Kukhona amafulethi ezinhlobonhlobo ezinjalo: izikhulu, ama-suites, ama-classic kanye nama-junior suites. Igumbi ngalinye lihlonyelwe ubuchwepheshe bamuva futhi lunezibhedlela zokugezela ngamatshe. Futhi lapho kutholakala khona ihhotela kukhona izindawo zokuhlala zabantu abakhubazekile namagumbi anamabhaloni.
Ihhotela "iBristol" linikeza izivakashi ukunambitha izitsha okumnandi endaweni yokudlela "Marconi". Ikhonza ukudla okumnandi okuvela emazweni ngamazwe nakwazwelonke. Engxenyeni yeBristol, i-A Luxury Collection, ikhona neCafé yaseBristol, isitayela saseVienna, lapho kukhona khona ama-confectionery amaningi nama-dessert athengiswa.
Chic e-Sheraton Warsaw Hotel 5 *
Phakathi nendawo yeWarsaw yihhotela elihle kakhulu leSheraton, lapho ungaya khona ku-National Museum ngemizuzu emihlanu nje. Ihotela liyikhethelo elihle kakhulu ngeholide elinethezeka ePoland. Abasebenzi abahloniphekile baseSheraton bazosiza izivakashi ukuba zivakashele ukuvakasha okungcono kweWarsaw kanye namathikithi ezinhlelo ezihlukahlukene zamasiko. Ekuseni, izivakashi zinikezwa ngesidlo sasekuseni se-buffet, futhi phakathi nosuku nakusihlwa izindawo zokudlela eziningana ezisezindaweni zehhotela zinikezwa ngezinsizakalo zabo.
Esikhungweni sokuzijabulisa salendawo yokuhlala ungagcina isimo nesimo se-steam ku-sauna yase-Finnish noma ebhukwini laseRussia. Njengoba ideskitho yokwamukela ivuliwe nxazonke, izivakashi zingakwazi ukuxazulula inkinga nganoma yisiphi isikhathi. Uhlu lwabasebenzi baseSheraton Warsaw lubandakanya inhlangano yokudluliselwa kwezivakashi ezivela noma ukuya esikhumulweni sezindiza. Amakamelo ehhotela afaka amakamelo angu-350, kufaka phakathi ama-suites. Ikamelo ngalinye linakho konke okudingayo ekwenzeni itiye nekhofi.
Ihhotela lokuklama elihloniphekile
Uma udinga iholidi elihloniphekile, khona-ke lingakunikeza ihhotela le-Hyatt Regency, elisendaweni enkabeni ye-Warsaw. Lesi sikhungo sigxile kuzivakashi eziqaphelayo ukuthi ziyini induduzo yangempela kanye nensizakalo ephezulu. Amakamelo angama-250 agqamile futhi avulekile akhiwe nge-pallet beige-grey futhi unikeza izivakashi zonke izinto ezidingekayo. Amakamelo anamafasitela e-panoramic, okuvela kuwo umbono ongafanelwe we-Warsaw. Ukuze uhlukanise isikhathi esichithwa ezindlini, ungabuka i-satellite satellite.
Amakamelo okugeza ayabhekana nemabula yemvelo. Ukumangala okumnandi kumvakashi ngamunye osanda kufika kuyoba ngamanzi amasha kanye nebhasikidi enezithelo ezintsha. Ihhotela linendawo yokudlela enhle, i-Venti-Tre, ekhonza izitsha zaseMedithera nase-Italy. Futhi uma udinga ngempela ukuphumula, ungasebenzisa izinsizakalo ze-Oasis Club.
Elinye ihhotela elinethezeka eWarsaw yi- Hotel Marriott, eliseduze nePhalamende lamaSiko neSayensi. Indawo yehhotela inhle kubo bobabili abahambayo nabahamba ngebhizinisi, njengoba indawo ikhona enhliziyweni yebhizinisi nesifunda sezohwebo. Isikhungo sathola indawo yaso kwesinye sezakhiwo eziphakeme kakhulu zenhloko-dolobha. Isakhiwo esiphelele sinamapulangwe angu-42. Ngokuba "ama-Marriott" anikezwe amacala amabili okugcina amabili no-20. Lo mnqabazane wanamuhla oqhakazile uphakamisa kakhulu ngenhla kwezwe lomuzi.
Leli hotele lihlaba umxhwele ngobukhulu obukhulu bokungenisa izihambi endaweni yokuvakasha, enezinombolo eziningi zokuzilibazisa, kunezinhlelo ezinhle kakhulu zezimbali, izitolo kanye nebha. Ihhotela linokudla okungu-11, kusukela kokudlela kwase-Italy kuya kokudla kwendawo.
Amahhotela amathathu nezinkanyezi namahhotela
Ngenhla sasizicabangela amahhotela aseWarsaw, anezinkanyezi ezine nezinhlanu. Kodwa edolobheni azikho amahhotela abizayo kangaka. Banezinkanyezi ezintathu nje kuphela, kodwa izinga lenkonzo ababenalo nalo lizinga eliphakeme kakhulu. Ngakho, izindawo ezinjalo ezidume kakhulu zokuhlala ziyi:
I-Metropol Hotel - isendaweni yase-Warsaw yeSrodmies. Uma umsebenzi oyinhloko womhambi ukuhlola izinto ze-capital yasePoland, futhi ungahloli ibhizinisi lehhotela, khona-ke iMetropol Hotel - yilokho akudingayo. Ungadla lapha e-restaurant yokudla kwamazwe ngamazwe, futhi kunconywa ukuba ulandele ukudla okulula nokuphuza ebhasini lendawo.
I-Ibis Warszawa Stare Miasto inikeza izivakashi 333 amakamelo okukhetha kuzo. Zinezimo zomoya kanye nezinye izinsiza. Ngenxa yokuxhumeka kwe-intanethi, izivakashi zingakwazi ukuhlala zixhumana nezihlobo zazo, futhi i-cable ye-cable izokuvumela ukuba udlule isikhathi lapho uhambo oluya edolobheni ngesizathu esithile lungenzeki.
Noma yikuphi amahhotela eWarsaw athola ukubuyekezwa okuhle. Kungakhathaliseki ukuthi yinkanyezi ezinhlanu noma izinkanyezi ezintathu, izivakashi zihlala zijabule nazo. Phela, ePoland bayakwazi ukunakekela izivakashi zabo, ngakho-ke abantu abahlala kwamanye amahhotela aseWarsaw bathi konke okukubo kwenziwa ngezinga eliphezulu kakhulu. Futhi abasebenzi abanobuhle bazo zonke izindawo ezibekiwe bazimisele ukufeza noma yisiphi isabelo. Amakhasimende aqaphela imishini yokunethezeka yamakamelo amahhotela eWarsaw nokuhlanzeka okubusa kuzo.
Ukuphumula Fortuna uhlelo Hurghada 4 *
Isisa AMAZING - mascarpone ushizi
I-Tablet "Lenovo" ngeke uvule: i izimbangela kanye nezincomo ukuxazulula inkinga
Uma avuvukele lymph node entanyeni